काम–नगर–पालिका « News of Nepal
दुई तिहाई जनतालाई सास्ती दिन होइन नि ल्याएको। आहत भएका जनतालाई राहत दिन पो हो सबैले मिलीजुली दुई तिहाइ मत दिएका। तर त्यसको ठीक विपरीत जनतालाई दुःख दिने काम भइरहनु हजम हैन। यस्तो कुरा धरहराले त सहने कुरै आउँदैन।
उनको नाम विद्यासुन्दर शाक्य भन्थे मान्छेहरू तर काम–नगर– पालिकको राजा भएपछि त्यो नाम फेरियो रे। अब उनको नाम सिद्याकुन्दर फाक्य राख्नुपर्छ रे।
यस्तो कुरा यात्रुहरूले उठाएको सुनेको हो धरहराले। कसैको एकोहोरो र पूर्वाग्रहीपूर्ण आरोप होइन। यी फाक्यले दिन पनि जनतालाई साह्रै तनाव दिएका रहेछन्।
गाडी सुन्धारामा रोक्न दिँदा रहेनछन्। सुन्धारामा झर्ने व्यक्ति त्रिपुरेश्वरमा झरेर सुन्धारासम्म हिँडेर आउनुपर्दाेरहेछ। जमल झर्ने व्यक्ति कि त्रिपुरेश्वरमै झर्नुपर्ने कि लैनचौर पुगेर झर्ने गर्नुपर्दाेरहेछ।
गाडी चढ्न पनि त्यही सास्ती रे। जस्तो कि सोह्रखुट्टे वा महाराजगन्जतिर जाने व्यक्ति गाडी चढ्न सुन्धारा र जमलबाट पाउँदैन। ऊ लैनचौर पो पुग्नुपर्दाेरहेछ।
यो अनावश्यक हण्डर धरहराले राम्ररी नियाल्यो। खासगरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका, बिरामी, बच्चाबच्ची बोकेका आमाहरूले पाएको सास्ती देख्दा धरहराको मन कटक्क मात्रै खाएन, दुई आँखाबाट बरर आँसु पनि झर्यो।
जसले भोट दियो आज तिनै निर्दाेषमाथि यत्रो चोट’ के थियो र ती अबलाहरूको खोट ? हुन त धरहरा एक्लैले चाहेर मात्र हुने के हो र’ यत्तिकैमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो, राजनको नामै सिद्याकुन्दर अनि उनको दरबारको नामै का–नगर–पालिका भएपछि कसको के लाग्छ र ? नामै नगर पालिका अनि नचाहिँदो काम नगरेर चाहिँदो काम गरोस् त ?